Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.5.1 အသုံးပြုခြင်းတည်ဆဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ
သင်မကြာခဏဆိုနိုင်တဲ့ coding သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိဘဲ, လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း၌စမ်းသပ်ချက် run နိုင်ပါတယ်။
Logistics, ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်၏ထိပ်ပေါ်တွင်သင်၏စမ်းသပ်မှုမွမ်းမံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အကြီးစားမှာ run နိုင်ပါတယ်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူလက်တွဲမလိုအပ်ပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်, ဂျနီဖာ Doleac နဲ့လုကာ Stein (2013) လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတိုင်းတာကြောင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခု run နိုင်ရန်အတွက် Craigslist ဆင်တူအွန်လိုင်းမှဈေး၏အားသာချက်ကိုယူ။ သူတို့က iPod ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြော်ငြာနှင့်စနစ်တကျရောင်းချသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြားအသုံးပြုပုံသူတို့စီးပွားရေးအရောင်းအပေါ်အပြေးပြိုင်ပွဲများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကုသမှုသက်ရောက်မှုများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော) ပိုကြီးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ယန္တရားများ) ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကိုအချို့သောစိတ်ကူးများကိုဆက်ကပ်သောအခါထို့ပြင်သူတို့ခန့်မှန်းဖို့သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှု၏စကေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Doleac နှင့် Stein ရဲ့ iPod ကိုကြော်ငြာသုံးခုအဓိကရှုထောင့်တစ်လျှောက်တွင်ကွဲပြား။ ပထမဦးစွာသုတေသီ (ပုံ 4.13) [တက်တူးနှင့်အတူအဖြူရောင်, အနက်ရောင်, အဖြူရောင်] က iPod ကိုကိုင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လက်ဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည့်ရောင်းသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြား။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့ကတောင်းဆိုနေတာစျေးနှုန်း [$ 90, $ 110, $ 130] ကွဲပြား။ တတိယ, သူတို့က [အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အရည်အသွေးနိမ့် (ဥပမာ, Capital အမှားအယွင်းများနှင့် spelin အမှားအယွင်းများ)] ကြော်ငြာစာသားကို၏အရည်အသွေးကွဲပြား။ ထို့ကြောင့်စာရေးသူ3ခဲ့ \_(\_times\_)3\_(\_times\_) mega- မှမြို့များ (ဥပမာ Kokomo, Indiana ပြည်နယ်နှင့်မြောက် Platt, Nebraska) မှအထိ 300 ကျော်ဒေသခံစျေးကွက်, ဖြတ်ပြီးချထားခဲ့သည့်2ဒီဇိုင်း မြို့ကြီးများ (ဥပမာ, New York နဲ့ Los Angeles မြို့) ။
ပုံ 4.13: များ၏စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုလက်စွဲ Doleac and Stein (2013) ။ iPod အွန်လိုင်းမှဈေး၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာရန်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူရောင်းသူအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကနေခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Doleac and Stein (2013) , ပုံ 1 ။
အားလုံးအခြေအနေများဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှရလဒ်များအတွက်မှာတော့တက်တူးတွေနဲ့ရောင်းသူအလယ်အလတ်ရလဒ်များကိုရှိခြင်းနှင့်တကွ, အနက်ရောင်ရောင်းသူထက်အဖြူရောင်းသူများအတွက်ပိုကောင်းခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, အဖြူရောင်းသူထက်ပိုကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိနှင့်အဆင့်မြင့်ဗိုလ်လုပွဲရောင်းချရန်စျေးနှုန်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအပျမ်းမျှအားဆိုးကျိုးများအပြင် Doleac နှင့် Stein သက်ရောက်မှုများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခန့်မှန်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစောပိုင်းကသီအိုရီကနေတစျခုခန့်မှန်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုဝယ်လက်များအကြားပိုပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုအရပ်၌စျေးကွက်များတွင်လျော့နည်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုပမာဏကိုတစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်ဈေးကွက်တွင်ကမ်းလှမ်းမှုများ၏အရေအတွက်ကိုသုံးပြီး, သုတေသီအနက်ရောင်ရောင်းသူအမှန်ပင်ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုအနိမ့်ဒီဂရီနှင့်အတူစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိခဲ့ပါကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်က high-quality နဲ့အရည်အသွေးနိမ့်သောစာသားနှင့်အတူကြော်ငြာတွေများအတွက်ရလဒ်များနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုပုံ Doleac နှင့် Stein ကြောင်းကြော်ငြာအရည်အသွေးကိုအနက်ရောင်နှင့်မှာတော့တက်တူးတွေနဲ့ရောင်းသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အားနည်းချက်ကတော့ impact ဘူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြော်ငြာများ 300 ကျော်စျေးကွက်၌ထားကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး, စာရေးသူအနက်ရောင်ရောင်းသူမြင့်မားတဲ့ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှင့်မြင့်မားသောလူနေအိမ်အသားအရောင်ခွဲခြားနှင့်အတူမြို့ကြီးများမှာပိုချို့တဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဤအရလဒ်များအဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ကိုအနက်ရောင်ရောင်းသူပိုဆိုးရလဒ်များရှိခဲ့ပေမယ့်အခြားလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ, စီးပွားရေးအရောင်းအအမျိုးမျိုးအတွက်လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှု၏အကြောင်းတရားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသီအိုရီအကြောင်းကြားရန်စတင်နိုင်ပါတယ်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးတိကျတဲ့နားလည်မှုပေးပါ။
ရှိပြီးသားစနစ်တွေအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်လုပ်ဆောင်သွားရန်သုတေသီများများ၏စွမ်းရည်ကိုပြသကြောင်းနောက်ထပ်ဥပမာ Arnout ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကသုတေသနဖြစ်ပါတယ် (2014) အောင်မြင်မှုသော့ပေါ်မှာ။ ဘဝများစွာကိုရှုထောင့်မှာတော့ထင်ရသောအလားတူလူပေါင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်။ ဒီပုံစံအဘို့တစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်အသေးစားနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျပန်း-အားသာချက်များအတွက်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွား, သုတေသီများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအားသာချက်ကိုခေါ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သေးငယ်တဲ့ကနဦးအောင်မြင်မှုများအတွက်သော့ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညှိုးရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (2014) ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်သင်တန်းသားများကိုအပေါ်အောင်မြင်မှုအထက်တွင်ရှိသည်ဟုလေးကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များအတွက်ကြားဝင်, ပြီးတော့ဒီမတရားအောင်မြင်မှု၏နောက်ဆက်တွဲသက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာ။
ပိုများသောအထူးသ, ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ (1) ကျပန်း Kickstarter ကတစ်ပေမယ့ website တွင်စီမံကိန်းများကိုရှေးခယျြဖို့ပိုက်ဆံကတိပြု; (2) အပြုသဘော Epinions တစ်အသီးအနှံပြန်လည်သုံးသပ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း rated; (3) ကျပန်းဝီကီပီးဒီးယားမှမျှဝေသူရှေးခယျြဖို့ဆုကိုပေးတော်မူ၏ နှင့် (4) change.org အပေါ်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အသနားခံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအားလုံးလေးယောက်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီးအလွန်ဆင်တူရလာဒ်များတွေ့ရှိခဲ့: တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌, ကျပန်းတချို့အစောပိုင်းအောင်မြင်မှုပေးခဲ့သူကိုသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏မဟုတ်ရင်လုံးဝချွတ်စွပ်အရွယ်အစားရွယ်တူ (ပုံ 4.14) ထက်ပိုနောက်ဆက်တွဲအောင်မြင်မှုရှိသည်ဖို့သွားလေ၏။ ဒီပုံစံကိုမဆိုအထူးသဖြင့်စနစ်၏တစ်ဦးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအခွင့်အလမ်းလျော့ကျစေပါတယ်ကြောင့်တူညီတဲ့ပုံစံအများအပြားစနစ်များထင်ရှားဆိုတဲ့အချက်ကိုသည်ဤရလဒ်များ၏ပြင်ပတရားဝင်မှုတိုးပွားစေပါသည်။
4,14 ပုံ: လေးခုကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေးစနစ်များအတွက်ကျပန်း၏အကြောင်းအောင်မြင်မှုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Arnout ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (2014) (1) ကျပန်း Kickstarter ကတစ်ပေမယ့ website တွင်စီမံကိန်းများကိုရှေးခယျြဖို့ပိုက်ဆံကတိပြု; (2) အပြုသဘော Epinions တစ်အသီးအနှံပြန်လည်သုံးသပ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း rated; (3) ကျပန်းဝီကီပီးဒီးယားမှမျှဝေသူရှေးခယျြဖို့ဆုကိုပေးတော်မူ၏ နှင့် (4) change.org အပေါ်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အသနားခံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Rijt et al. (2014) , ပုံ2။
အတူတကွဤဥပမာနှစ်ခုကိုသုတေသီများကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်လုပ်ဆောင်သွားရန်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်ကိုပြသပါ။ ထို့ပြင်စားပွဲပေါ်မှာ 4.2 သုတေသီများကုသမှုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်ရှိပြီးသားစနစ်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်နိုင်ခြေသည်အဘယ်အရာ၏အကွာအဝေးကိုပြသကြောင်းပင်နောက်ထပ်ဥပမာပေးပါသည်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်သုတေသီများအဘို့အတော်လေးစျေးပေါဖြစ်ကြပြီးသူတို့သရုပ်မှန်၏မြင့်မားသောဘွဲ့ဆက်ကပ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်တန်းသားများကို, ကုသ, နှင့်တိုင်းတာခံရဖို့ရလဒ်များအပေါ်သုတေသီများကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်ကပ်။ ပိုသတင်းအချက်အလက်များသည် ဖြစ်. , ထို့ပြင်တစ်ဦးတည်းသာစနစ်အရပျကိုယူပြီးစမ်းသပ်ချက်အဘို့, သုတေသီများသက်ရောက်မှု system ကို-တိကျတဲ့ဒိုင်းနမစ် (ဥပမာ Kickstarter ကပရောဂျက်များသို့မဟုတ် change.org အသနားခံအဆင့်သောလမ်းအများဆုံးသောလမ်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်စိုးရိမ်နေကြရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ) အခန်း2အတွက် algorithmic သဖွငျ့ ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ။ သုတေသီများအလုပ်လုပ်စနစ်များအတွက်ကြားဝင်လာသောအခါနောက်ဆုံးတွင်, လှည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုသင်တန်းသားများကိုတတ်နိုင်သမျှအန္တရာယ်, Non-သင်တန်းသားများနှင့်စနစ်များအကြောင်းကိုပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ ကျနော်တို့အခန်း6တွင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ဒီလိုကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်း, ဗန်က de Rijt et al ၏နောကျဆကျတှဲအတွက်သူတို့ထဲကတစ်ဦးဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုလည်းမရှိ။ (2014) ။ ရှိပြီးသား system ထဲမှာအလုပ်လုပ်အတူပါလာသော trade-off တိုင်းစီမံကိနျးအတှကျစံပြမဟုတ်, ငါလာမယ့်ဥပမာပေးရလိမ့်မယ်အဖြစ်အကြောင်းပြချက်အချို့သုတေသီများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ် system ကိုတည်ဆောက်စေ။
စားပွဲတင် 4.2: တည်ရှိစနစ်များအတွက်စမ်းသပ်မှု၏ဥပမာများ
ဝီကီပီးဒီးယားမှပံ့ပိုးမှုများအပေါ် barnstars ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
လူမျိုးရေးခွဲခြား tweets အပေါ်ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်သတင်းစကားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Munger (2016)
ရောင်းချစျေးနှုန်းအပေါ်လေလံပွဲနည်းလမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Lucking-Reiley (1999)
အွန်လိုင်းလေလံစျေးနှုန်းအပေါ်ဂုဏ်သတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Resnick et al. (2006)
ebay မှာဘေ့စ်ဘောကဒ်များရောင်းချခြင်းအပေါ်ရောင်းချသူ၏မျိုးနွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
iPod များ၏ရောင်းရငွေအပေါ်ရောင်းချသူ၏မျိုးနွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Doleac and Stein (2013)
Airbnb ငှားရမ်းမှုများအပေါ်ဧည့်သည်၏မျိုးနွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
Kickstarter ကပရောဂျက်များ၏အောင်မြင်မှုကိုအပေါ်လှူဒါန်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက် Rijt et al. (2014)
အိုးအိမ်ငှားရမ်းမှုများအပေါ်အပြေးပြိုင်ပွဲနှင့်လူမျိုးစုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Hogan and Berry (2011)
Epinions အပေါ်အနာဂတ် ratings အပေါ်အပြုသဘောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Rijt et al. (2014)
အသနားခံ၏အောင်မြင်မှုကိုအပေါ်လက်မှတ်ပေါင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014) ; Rijt et al. (2016)